21+ Kooxaha Diirada Lacag -bixinta ee Lacag -La'aanta ah ee ugu Fiican 2022 | Samee in ka badan 400/hr -
Bogga ugu weyn 21+ Kooxaha Diirad -bixinta Lacag -bixinta ee Online -ka ugu Fiican 2022 | Samee in ka badan 400/saac
21+ Kooxaha Diirad -bixinta Lacag -bixinta ee Online -ka ugu Fiican 2022 | Samee in ka badan 400/saac
Haddii aad fikrado qeexan ka haysato badeecado gaar ah, siyaasad, ama badeecado kale oo aad rabto in magdhow lagu siiyo, markaa waa inaad ka qaybgashaa kooxaha lacag bixinta ee sharciga ah halkaas oo aad kula wadaagi karto fikradahaaga, oo aad hesho $400 saacaddii iyo wax ka badan.
Shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba waxay shaqaaleeyaan shirkado cilmi baaris si ay u darsaan isbeddellada hagaajin kara qorshayaashooda ganacsi. Shirkadaha cilmi -baadhistu, waxay, ururiyaan kooxaha diiradda iyo macluumaadka dadka dhabta ah ee adiga oo kale ah ee ku saabsan adeegyada iyo badeecadaha.
Qoraalkan, waxaan si weyn uga doodi doonnaa kooxaha diirad -siinta sharciga ah ee ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ku kasban kara ilaa $ 400 saacaddii iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kooxaha diiradda sharci -darrada ah ee lacag -bixinta ah.
Waa maxay kooxda Focus Focus?
Koox xooga saartaa waa a habka cilmi baarista suuqa kaas oo 6 ilaa 10 qof ay isugu yimaadaan qol si ay u bixiyaan jawaab celin ku saabsan badeecad, adeeg, fikrad, ama olole suuqgeyn.
Ka -qaybgalayaasha kooxda diiradda waxaa la shaqaaleysiiyaa iyada oo ku saleysan taariikhdooda wax iibsiga, tirakoobka dadka, cilmi nafsiga, ama dabeecadda oo sida caadiga ah isma yaqaanaan.
Kooxaha diirad-saaridda lacag-bixintu waa nooc taariikhda lagu wado oo cilmi-baaris suuqa ah sida sahanno, ujeeddada ugu weyn oo ah in la ururiyo fikradaha iyo tirakoobka si loo saadaaliyo isbeddellada, loo hagaajiyo badeecadaha ama loo horumariyo kuwa cusub.
Kooxaha diirad -bixinta ayaa shaqsi ahaan u shaqeeya (waxaad u baahan tahay inaad ka soo muuqato meel gaar ah) iyo internetka.
Maxay qabtaan kooxaha Focus?
Ka -qaybgalayaasha kooxaha diiradda ayaa ku hawlan hawlaha soo socda inta ay ku guda jiraan hawshooda;
Badanaa waxaa loo adeegsadaa cilmi -baarista suuqa ee badeecadaha cusub ama hadda jira si loo go'aamiyo dabeecadaha dadka ee ku wajahan sumadaha gaarka ah, adeegsiga, baakadaha, ama fikradaha.
Waxa kale oo loo adeegsan karaa ololeyaal siyaasadeed iyo ra'yi ururin. Waxaad ka fekeri kartaa kooxaha diiradda la bixinayo sida sahanno aad u qoto dheer.
Caadi ahaan, waa inaad ka dhiibataa fikradaha oo aad ka jawaabtaa su'aalaha mowduuc gaar ah, naftaada qaxwo bilaash ah, oo gurigaaga ku laabo $ 50 illaa $ 150 dheeraad ah oo jeebkaaga ku jira!
Shirkado badan ayaa adeegsanaya daraasado cilmi baaris oo lacag -bixin ah si ay si fiican u fahmaan suuqa iyo isbeddellada, iyo inay la xiriiraan macaamiisha ma aha oo kaliya gudaha laakiin adduunka oo dhan.
Sidee ayay u shaqeeyaan Kooxaha Focus?
Haddii aad ka heli karto koox diirad -saarid oo kuu dhow, waxaa lagaa filayaa inaad timaadid wareysiga shaqsi ahaan. Badanaa waxaa lagu wareysan doonaa koox qof walba wada hadli karo.
Caadiyan, waxaa jira cilmi-baare ama fududeeye kaasoo hogaamiya kooxda, qaata qoraalo, weydiiya su'aalo, oo diiwaan geliya natiijooyinka.
Markaad ku biirto koox diirada saarta shaqsiga, waxaa laga yaabaa inaad ka soo qayb gasho wax ka badan hal kalfadhi, laakiin waxaad lacag ku heshaa fadhi kasta oo aad timaadid.
Kooxda diiradda onlayntu waxay aad ula mid tahay koox-fiirsasho shaqsiyeed. Waa inaad online kaga qaybgashaa sheeko, tablet-kaaga, ama casriga ah.
Caadi ahaan waxaad heli doontaa xiriir kuu oggolaanaya inaad gasho kooxda diiradda. Halkaas, waxaad ku biiri kartaa doodda oo aad bixin kartaa ra'yi -celintaada.
Waxaa jira qaar ka mid ah kooxaha diiradda onleenka oo waliba adeegsada fiidyowyo ama barnaamijyo ku saleysan webka qaarkood. Waa inaad soo dejisaa softiweerka kahor baaritaanka kooxda diiradda.
Daraasado cilmi -baaris oo dheeraad ah ayaa hadda doorbidaya kooxaha diiradda ee onlaynka ah maxaa yeelay aad bay uga jaban yihiin: waxaad ku kharashgarayn kartaa agab iyo shaqaale, aad bayna u sahlan tahay in la helo barkad weyn oo ka -qaybgalayaasha iman kara daraasadda cilmi -baarista.
Sidee ayay u shaqeeyaan kooxaha diiradda ee internetka?
Kooxaha diirada saaraya khadka tooska ah waxay ku shaqeeyaan wicitaan shir ama, marar badan, wada sheekaysiga fiidiyaha kooxeed si ay si aad ah ugu ekaadaan khibradda shaqsiyeed.
Dhexdhexaadiye ayaa hoggaamiya wada -xaajoodka kooxda ka -qaybgalayaashu waxay isku hagaajin karaan iyaga oo isticmaalaya kaameeradooda webka, makarafoonka kombiyuutarka, ama khadka taleefanka.
Intee in le'eg ayay tahay in koox -fiirsigu sii jirto?
Kooxaha xooga la saaraa waxay badiyaa soconayaan qiyaastii 60 ilaa 90 daqiiqo. Koox diirada saarta oo ka badan 90 daqiiqo waxay u badan tahay inay qabaan su'aalo ama mawduucyo aad u badan oo laga doodo. Kooxda xoogga saartaa waa inay ku habboon tahay nooca ka -qaybgalayaasha kooxda.
Intee in le'eg ayaad ku samayn kartaa kooxaha diiradda la saaray?
Koox -kooxeed kasta way ka duwan tahay, laakiin waxaad filan kartaa inaad samayso $ 30 illaa $ 150 koox -kooxeed kasta (inkastoo qaar ka mid ah kooxaha diiradda gaarka ahi ay bixin karaan ilaa $ 450 saacaddii wakhtigaaga!).
Qaddarka aad heli doontaa wuxuu ku xiran yahay waqtiga aad qaadatay, badiyaa saacad ama laba.
Caadi ahaan, waxaad noqon doontaa lacag caddaan ah lagu bixiyay, PayPal, jeeg, ama kaarka hadiyadda. Shirkadaha cilmi -baarista qaarkood waxay ku bixiyaan dhibco aad ku soo furan karto kaarka deynta ee gaarka ah.
Hubi inaad si sax ah u taqaan sida loo helo lacagtaada ka hor intaadan oggolaan inaad ka qeyb gasho koox diiradda la saarayo.
Kooxaha Diirada Lacag -bixinta ee Sharciga ah ee ugu Fiican
Halkaan waxaa ah kooxaha diiradda lacag -bixinta ee sharciga ah ee ugu wanaagsan oo hubaal ah inay ku siin doonaan ka -qaybgalka kooxda diiradda.
Sidii aan hore u sheegnay, badankoodu ma bixiyaan lacag caddaan ah ee waxay ku qaataan kaarar hadiyad ah iyo waxyaabo kale oo la soo furan karo.
Madal Intarneedka Ugu Xalaasha Badan Ee Loogu Talagalay Samaynta Lacag Dheeraad ah adigoo Dhamaystiraya Sahaminta onlaynka ah.
Waxa kaliya ee maskaxda lagu hayo ayaa ah in Survey Junkie aanu ku siin lacag caddaan ah, laakiin dhibcaha lagu soo furan karo kaararka hadiyadda. Laakiin waayo-aragnimada oo dhan waa mid aad u fudud oo toos ah.
XIDHIIDHKA: Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Sameeyo Blog -ka 2022 | Eeg Khiyaamadayada
Survey Junkie inta badan waa shirkad sahan. Waxaad ka kasban kartaa meel kasta $ 0.5 ilaa $ 5 sahankooda (inkasta oo celcelis ahaan ay u badan tahay inuu u dhexeeyo $ 1 iyo $ 1.50). Markaad is -qorto, waxaad iska qori kartaa qaar ka mid ah kooxaha diiradda weyn iyo daraasadaha.
Soo -jeedimaha Junkie Survey:
Tijaabooyin wax soo saar: Illaa $ 50 - Hel badeecad Bilaash ah si aad isugu daydo oo aad u bixiso! Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad dhammaystirto sahaminta internetka ka dib markaad isticmaasho.
Kooxaha Focus Personal.
Sahanka Taleefanka: Illaa $ 100 - Waxaad kaga jawaabi doontaa su'aalaha cilmi baarista suuqa hal wicitaan.
Bixinta: $ 2-75 u dhiganta sahan kasta
Halkan guji si aad u bilowdid
Waraysiyada isticmaalaha ayaa hore looga heli jiray oo kaliya Maraykanka ama Kanada. Laakiin waxay dhawaan fureen daraasado caalami ah waxayna ku darayaan daraasado cilmi -baaris oo aad iyo aad u badan.
Nooca dhiirigelinta iyo xaddiga ayaa la muujiyaa ka hor intaadan dooran daraasad si aad u tixgeliso habka lacag bixinta kahor intaadan dalban.
Waxa wanaagsan ee ku saabsan wareysiyada isticmaalaha ayaa ah in waxbarashadoodu aad u kala duwan tahay, oo daboolaysa mowduucyo kala duwan: farsamada, cuntada, badeecadaha macmiilka, qoyska, software, hiwaayadaha, xayawaanka guriga, isboortiga, gaadiidka, quruxda, warbaahinta bulshada, muusigga, wax kasta oo aad ugu yeerto .
Waxay qayb ka noqdaan wada hadalka maadaama badeecooyin cusub, barnaamijyo, mareegaha, iwm.
Bixinta: $ 10-100 sahan kasta
Ipsos ayaan idhi
Ipsos waa shirkadda saddexaad ee ugu weyn ee cilmi-baaris ku salaysan sahan ee adduunka oo madalkeeda sahanka macmiilku wuxuu aqbalaa dadka adduunka oo dhan.
Waa goob sahan oo bixisa abaalmarino aad u kala duwan waqtigaaga iyo ra'yigaaga, laga bilaabo lacag caddaan ah ilaa badeecad, kaararka hadiyadda, iyo xitaa samafalka.
Inta badan heshiisyada la heli karo waxaa loogu talagalay sahanno yaryar, kuwaas oo kaliya ku kasban kara $ 0.40 illaa $ 1.50 sahan kasta. Si kastaba ha noqotee, waqti ka waqti waxay bixiyaan sahanno heer sare ah iyo kooxo feejignaan ah oo bixiya $ 50 illaa $ 100 saacaddii waqtigaaga.
Waxa kale oo ay leeyihiin barnaamij moobiil ah oo kuu oggolaanaya inaad sahamin ku samayso markaad socoto.
Dhameystirka sahan ama koox diirad saar ayaa dhibco kuu kasban doonta halkii aad kaash ahaan u heli lahayd. Dhibcuhu way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran dhererka sahanka. Waad soo ceshan kartaa dhibcahaaga marka ugu yaraan 500 koontadaada ku jirto.
Bixi: $ 50-100 saacaddii
FocusGroup.com waxay bixisaa kooxo shaqsi ahaan iyo intarneedka intarneedka labadaba. Waxaad arki kartaa inta aad ku bixin karto “waxbarashada la heli karo”. Daraasadaha badankood waxay bixiyaan inta u dhaxaysa $ 70 iyo $ 250.
Inta badan daraasadaha cilmi -baarista ee aad xiiseyneyso waxay u badan tahay inay ku jiraan mowduucyada macaamiisha, oo ay ku jiraan:
Badeecadaha la xiriira ilmaha
Si aad wax u cunto
Laakiin waxaad sidoo kale wax ka qabataa mowduucyada gaarka u ah ganacsiga iyo caafimaadka. Hababka lacag -bixintaadu way ku kala duwan yihiin daraasad kasta oo cilmi -baaris ah. Hubi inaad hubiso inaad ku faraxsan tahay habka lacag bixinta ka hor intaadan dalban.
Bixinta: $ 75-150 sahan kasta
Jawaab-bixiyeyaashu waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay daraasadaha shaqsi ahaan iyo kuwa khadka tooska ah ee kooxda. Lacag-bixintoodu waa mid aad u fiican, ilaa $150 cilmi-baadhis kasta, mararka qaarkoodna ka badan, waxayna aqbaleen jawaab-bixiyeyaasha adduunka oo dhan.
Respondent.io waxay leedahay mashaariic ay heli karaan muwaadiniinta Mareykanka iyo muwaadiniinta caalamiga ah labadaba. Tani waxay ka dhigan tahay maahan inaad joogtid Mareykanka si aad xubin uga noqoto oo aad meel kasta uga hesho $ 50 illaa $ 250 baaritaan kasta.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku biirto koontada PayPal iyo midkood Facebook ama LinkedIn si aad ugu xirto astaantaada.
Bixin: $ 150 saacaddii
Ra'yi ururin toos uga socota Google. Haa! taasi waa wax dhab ah. Waxaad ku biiri kartaa Google User Research si aad ula wadaagto khibradaada. Markaad dhammaystirto sahanka, waxaad heli doontaa kaarka hadiyadda ama waxaad ku deeqi kartaa lacagta sadaqo.
Marka, waa waxoogaa khiyaano ah, kuma hodan doontid, laakiin waa hab weyn oo badbaado leh oo lagu hubiyo waxa ay tahay kooxda diiradda onlaynka ah.
Bixin: $ 75 saacaddii
Shaqaaleynta iyo Goobta
Shaqaalaynta iyo Goobtu waa shirkad cilmibaaris suuqeed oo heer qaran ah oo samaysa sahan shaqsi iyo mid online ah.
Waxay bixiyaan waxbarashooyinka tooska ah ee khadka tooska ah ee Mareykanka iyo sidoo kale kooxaha diiradda meelo kala duwan waxayna raadinayaan kaqeybgalayaasha dhammaan jinsi iyo da 'inay wax bartaan, oo ay ku jiraan xirfadlayaal iyo xirfadlayaal caafimaad (dhakhtar, kalkaaliso, farsamo -yaqaan shaybaar).
Bixinta: $ 100- $ 275 daraasad kasta
Fikradda Macaamiisha Mareykanka
Fikradda Macaamiisha Ameerika waa shirkad sahan oo weyn oo Mareykan ah oo leh in ka badan 7 milyan oo isticmaale. Waa bilaash inaad is -qorto oo waxaad lacag ku heli kartaa laba siyaabood: PayPal ama jeeg.
Inta badan ma bixiso lacag aad u badan si aad u kasbato inta u dhaxaysa $ 0.05 iyo $ 0.50 sahannada gaagaaban. Si kastaba ha noqotee, haddii laguu doorto sahanno cilmi baaris oo dheer, waxaad samayn kartaa ilaa $ 50.
Waxaad heli doontaa dhibco sahan kasta oo aad qaadatid. 1 dhibic waxay la mid tahay 1 dinaar. Markaad gaarto $ 10.00 waxaad dalban kartaa lacagtaada.
Waa shirkad aad loo qiimeeyay oo sharci ah oo bixisa beddel fikrad.
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista Codadka Sahanka 2022: Sharci mise Fadeexad? Sida ay u shaqayso, Beddelka
Bixinta: ilaa $ 50 sahan kasta
Quudinta Sahanka waa degel ururiya fursadaha cilmi -baarista ee ugu mushaarka badan. Qaar iyaga ka mid ah ayaa la dhigay khadka tooska ah waxayna bixiyaan abaalmarino aad u wanaagsan, kuwa kale waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah walina waxay ku siiyaan lacag aad u fiican.
Quudinta Sahanka waxay ku saleysan tahay Mareykanka waxayna fursado ka heshaa magaalooyin badan oo Mareykanka ah (Boston, New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, si loogu magacaabo dhowr) iyo onlayn. Waxaad ka kasban kartaa meel kasta $ 50 ilaa $ 475.
Quudinta Xog -ururinta oo Khaas u ah:
Daraasado cilmi baaris caafimaad
Sahaminta khadka tooska ah
Boggaaga Facebook ayaa marar badan la cusbooneysiiyaa iyada oo leh fursado cilmi baaris oo waaweyn.
Bixinta: Illaa $ 2,000 daraasad kasta oo khadka tooska ah iyo illaa $ 300 daraasad kasta oo onlayn ah
20 | 20 Guddi
20 | 20 guddi waxay bixisaa cilmi baaris suuqa. Barashadooda internetka waxay ka yimaadaan warshado kala duwan, iyo daraasadaha maxalliga ah ayaa laga heli karaa suuqyada qaarkood (Charlotte, Miami, iyo Nashville). Si fiican ayaa loo qiimeeyay waxaadna ka samayn kartaa meel kasta $ 50 ilaa $ 2500.
Waxay adeegsadaan boggooda Facebook si ay ugu dhajiyaan sahanno u qalma kahor ama u diraan emayl. Waa laguula socon doonaa haddii aad u qalanto oo aad bixiso faahfaahinta daraasadda.
Bixinta: $ 5-2500 sahan kasta
Mindswarms waa guddi doorasho caalami ah oo ururiya xogta qaab fiidyowyo ah. Markaad ku qanacsan tahay, la xiriir Mindswarms oo qor jawaabaha sahanka la soo xulay.
Mindswarms waa mid aad u qaas ah taas oo ku siinaysa $ 50 si aad uga jawaabto 7 su'aalood oo ku saabsan badeecad ama adeeg, ama $ 10 si aad uga jawaabto 1 su'aal.
Haddii laguugu yeedho sahan, waxaa lagu weydiin doonaa inaad ka jawaabto ilaa 7 su'aalood adiga oo adeegsanaya shaqada fiidiyowga ee taleefankaaga casriga ah, kiniiniga ama kaameradaada. Waxay qaadataa wax ka yar 10 daqiiqo si loo qoro jawaabahaaga.
Markaa si otomaatig ah ayaa laguu siin doonaa PayPal 24 saacadood kadib markaad u soo dirto jawaabahaaga daraasad.
Bixinta: $ 50 daraasad kasta
Inspired Opinions waa shirkad xog ururin oo la shaqeysa summadaha caanka ah ee adduunka. Waxaad ku kasban kartaa meel kasta laga bilaabo $50 ilaa $250 markaad ka qaybgasho mid ka mid ah kooxahooda diiradda.
Waxay adeegsadaan nidaamka dhibcaha abaalmarinta ra'yiga. Oo waa inaad gaarto 1,000 ($ 10) ka hor intaadan u soo iibsan dhibcaha kaararka hadiyadda.
Markay helaan daraasad ku habboon astaantaada, waxay kula soo xiriiri doonaan emayl ahaan ama taleefan si ay u eegaan haddii aad u qalanto.
Waxaad markaa ka qaybqaadan kartaa daraasado cilmi baaris siyaabo dhowr ah:
Shaqsi ahaan mid ka mid ah 16 -ka xafiis ee ay ku leeyihiin USA
Khadka kombiyuutarka meel kasta oo adduunka ah
Bixinta: $ 5-100 sahan kasta
Ka -qaybgal Daraasado
Waa shirkad cilmi baaris ah oo la shaqeysa shirkado, shaqsiyaad, iyo machadyo.
Waxay ku takhasustay daraasadaha cilmi-baarista suuqa ee macaamilka iyo daryeelka caafimaadka (waxaad u baahan doontaa inaad doorato mid markaad isqorto) waxayna ku bixiyaan meel kasta $50 ilaa $250.
Bixinta: $ 5-250 sahan kasta
In kasta oo degelkan kaliya uu bixiyo waxqabadyo koox -kooxeed marmar, haddana waxaa hubaal ah inay mudan tahay in la iska diiwaangeliyo mareegaha si loo hubiyo bixinta ay bixiyaan. Taasi waa sababta oo ah waxay si fiican u bixiyaan iyaga.
Inta badan kooxaha halkan joogaa waxay qaataan dhowr maalmood si ay u dhammeeyaan, laakiin waxay bixiyaan waqti badan si ay u sameeyaan. Goobtu waxay kaloo bixisaa ilaa $ 5 sahan kasta, markaa waxaad samayn kartaa xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah intaad sugayso soo -jeedin kooxeed inay soo baxdo.
Bixinta: $ 5 sahan kasta
In kasta oo aad ku samayn karto qiyaastii $ 10 illaa $ 30 sahannada Toluna, waxay sidoo kale bixiyaan waxqabadyo koox -kooxeed oo lagu siin karo lacag aad ku samayso.
Ka dib markaad dhammaystirto sahan, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah in laguugu yeedho kooxahooda haddii macluumaadkaaga astaanta ahi ay u dhigmaan u -qalmitaanka waxbarasho kooxeed.
Toluna sidoo kale waxay la shaqaysaa nidaamka dhibcaha. Qaar ka mid ah kooxaha diiradda ayaa qiimayn kara in ka badan 50,000 oo dhibcood, taas oo u qalanta tan oo lacag ah marka aad bixinayso abaalmarintaada.
Waxay kaloo leeyihiin app mobiil: macruufka, Google Play
Bixinta: $ 10-30 sahan kasta
Dynamics Experience wuxuu ku takhasusay waayo -aragnimada adeegsadaha iyo tijaabinta is -dhexgalka isticmaaleyaasha (UX iyo UI). Macaamiisha shirkadu waxay siiyaan lacag si ay “uga dhigaan adeegsadayaashooda dhoolla -caddayn,” wayna soo jeestaan ​​oo ay lacag siiyaan dadka adiga oo kale ah si ay uga bixiyaan jawaab -celin daacad ah naqshadaha mareegaha iyo codsiyada software -ka.
Sida laga soo xigtay websaydhka, waxay shaqaalaysiinayaan tijaabiyeyaasha adduunka oo dhan oo leh dhammaan heerarka khibradda tikniyoolajiyadda. Daraasadaha badankood waxay bixiyaan inta u dhaxaysa $ 50 iyo $ 150.
Dynamics Experience ayaa sidoo kale u sahlaysa:
Daraasado goob-joog ah, waraysiyo 1-2 saacadood ah oo gurigaaga ama shaqadaada ah.
Daraasadaha xusuus-qorka oo aad ku qori karto fikradahaaga 1-2 toddobaad.
Kooxaha diiradda internetka
Guddi cilmi -baaris adeegsade si ay u bartaan waayo -aragnimada isticmaalaha oo ay ku jiraan tijaabinta adeegsadaha, cilmi -baarista adeegsadaha, naqshadeynta is -dhexgalka, iyo naqshadeynta muuqaalka.
Bixinta: $ 50-150 daraasad kasta
Shirkadan waxay la shaqaysaa bilowga iyo shirkadaha Fortune 500 si ay u bixiyaan cilmi baaris ku saleysan adeegsadaha. Asal ahaan, tan micnaheedu waa macluumaad kasta oo ay siiyaan meheradaha waxaa bixiya adeegsadayaasha lacagta leh sida adiga.
XIDHIIDHKA: 15+ Hackers Sameynta Lacagta 2022 | Samee ugu yaraan 7 isla markiiba
Waxay bixiyaan daraasado kooxeed oo gaagaaban iyo kuwo dheer. Halka kooxaha gaagaaban ay jeebka ku bixiyaan oo kaliya, qaar ka mid ah kooxaha dhaadheer ayaa bixiya midkiiba $ 100.
Bixinta: $ 100
Gunnooyinka goobta shaqada ee ka -qaybgalka kooxda diiraddu waxay ka bilaabataa $ 75, oo kooxaha diiraddoodu caadi ahaan waxay socotaa hal illaa laba saacadood.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan ku noolayn meel u dhow mid ka mid ah goobahan, waxaad weli codsan kartaa inaad ku biirto xogta qaranka. Caadi ahaan waxaad ku bixisaa kaararka hadiyadda ee Visa laakiin hubi ka hor intaadan codsan koox-fiirin.
Bixinta: $ 75
Baaritaanka Suuqa Baaritaanka
Baaritaanka Baaritaanku waa shirkad cilmi-baaris oo fadhigeedu yahay Mareykanka waxayna si joogto ah u martigelineysaa kooxaha diiradda si loo helo warcelin ku saabsan ololeyaasha cusub ee xayeysiiska, badeecadaha, ama adeegyada.
Macaamiisha, xirfadlayaasha caafimaadka, iyo madaxda sare waxay u baahan yihiin qaybaha Cilmi-baarista Suuqa Probe.
Soo-saareyaasha waaweyn iyo summadaha waxay u xilsaaraan Baaritaanka iyo la-hawlgalayaasheeda si ay u sameeyaan sahanno onlayn ah, muuqaallada wax iibsiga ee dahsoon, xeerbeegtida jeesjeeska ah, tijaabooyinka alaabta, iyo wax ka badan.
Kooxaha diiradu sida caadiga ah waxay bixiyaan meel kasta $ 50 ilaa $ 400. Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaadan xataa ka tagin gurigaaga.
Wareysiyada waxaa lagu qabtaa kooxo, taleefan, ama online - iyadoo ku xiran waqtiga loo qoondeeyay daraasaddan gaarka ah.
Bixinta: $ 50-400 sahan kasta
Machadka Calaamaduhu wuxuu raadinayaa ka -qaybgalayaasha adduunka oo dhan si ay uga qayb -qaataan cilmi -baarista dawooyinka iyo suuqa.
Shirkadani waxay ugu horrayn la shaqaysaa daryeelka caafimaadka iyo warshadaha kale ee caafimaadka. Marka, haddii aad asal u leedahay wax ka qabashada warshadahaan ama haddii aad ka shaqeyso warshadaha caafimaadka, tani waxay noqon kartaa meesha ugu habboon ee la iska qoro.
Inta badan waxyaabaha kooxda diiraddu waxay u heellan tahay magacyada summada, khadadka sumadda, tijaabooyinka fikradda, iyo wax kaloo badan.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad diiwaangeliso faahfaahintaada oo aad ka jawaabto dhowr su'aalood oo fudud. Hubi in koontadaadu ay tahay mid hadda jirta oo suurtogal ah iyo in lagula soo xiriiri doono haddii aad u qalanto waxbarasho.
Mushaharka: $ 50- $ 300
Cilmi baarista Plaza
Cilmi -baarista Plaza waxay meelo ku leedahay 14 magaalo oo Mareykanka ah. Waxay ku takhasustay kooxaha diiradda gaarka ah waxayna siisaa $ 50 illaa $ 200 ka -qaybgalayaasha kooxda.
Kooxaha diiradda ayaa inta badan dhaca maalinta iyo fiidkii labadaba. Waxay u baahan doontaa inaad tijaabiso badeecad cusub, dib u fiiriso xayeysiiska TV-ga, ama ka hadasho alaabta mustaqbalka.
Waxaad ka kasban kartaa meel kasta $ 50 illaa $ 200 fadhi laba saacadood ah.
Mushaharka: $ 50- $ 200
WatchLab waxay leedahay degel aad u foolxun oo aan ku filnayn, laakiin waxay ku andacoodaan inay u oggolaanayaan dhammaan noocyada kooxaha diiradda saaraya, tijaabooyinka adeegsiga, wareysiyada, xeerbeegtida been abuurka ah, iyo inbadan.
Lacag-bixinta ayaa ku kala duwanaan doonta iyadoo lagu saleynayo cilmi-baaris iyo laga yaabee qaab kaararka hadiyadda ama lacag caddaan ah. WatchLab waxay ku leedahay goobo San Francisco iyo Chicago, iyo sidoo kale doorashooyin online ah.
Kooxaha diirada gaarka ah ee aad ku bixiso gudaha, raadinta onleenka waxay qaadan kartaa 4-6 toddobaad.
WatchLab waxay leedahay kooxo diirada saaraya khadka tooska ah, daraasado cilmibaaris shaqsiyeed, iyo daraasado guriga dhexdiisa ah. Waxaad ka eegi kartaa boggooda Facebook si aad u aragto kooxaha diiradda ay bixiyaan.
Waxaad ku kasban kartaa meel kasta $50 ilaa $200 daraasadda (Mareykanka kaliya).
Sida Loo Helo Kooxaha Diirada Leh Ee Xalaasha Ah
Haddii aad raadinayso kooxaha diiradda onlaynka ah ama kooxaha diiradda shaqsiyeed ee aaggaaga, waxaad u baahan tahay inaad noqoto bukaan yar maadaama ay tahay inaad soo marto habka baaritaanka kahor intaadan ka qaybqaadan daraasadda cilmi -baarista.
Shirkadaha cilmi -baarista macaamiishu sida caadiga ah waxay raadiyaan dadka leh danaha iyo astaamaha gaarka ah, lagana yaabo inaadan mar walba u qalmin.
Markaad ku biirto shirkado badan intii suurtogal ah, waxaad sare u qaadi kartaa fursadahaaga u -qalmitaanka kooxaha diiradda badan intii suurtogal ah.
Kahor intaadan is qorin, qaado daqiiqado yar si aad dib ugu eegto shirkadda oo aad hubiso inay sharci tahay. Waxa ugu dambeeya ee aad rabto ayaa ah inaad waqtigaaga ku lumiso in lagu khiyaameeyo internetka!
Akhri dhammaan daabacaadda ganaaxa oo fiiri boggooda Facebook si aad u ogaato nooca dib -u -eegista ay helaan. Sida dhammaan shirkadaha sahanka, waligaa kama heli doontid qiimeyn 5-xiddig ah dhammaantood! Dadka qaar baa jeclaan doona, qaar kalena way neceb yihiin.
In kasta oo kooxaha diiradda internetka laga yaabo inaysan bixin dhammaan biilashaada, weli waad bixin kartaa lacag jeebka ka samee iyaga la. Xusuusnow inaadan qaadan wax badan oo aadan xamili karin.
Haddii aad si liidata u samayso hal koox diiradda, waxaa laga yaabaa inaan laguu dooran inaad mid kale la samayso shirkaddaas gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad shaqo fiican qabato, waxay u badan tahay in mustaqbalka laguu soo xuli doono wax intaas ka badan.
Haddii aad rabto inaad la wadaagto fikradahaaga ku saabsan badeecadaha ama isbeddellada, samaynta cilmi-baarista suuqa ayaa kuu ah dhinac-weyn. Igu soo sheeg faallooyinka waxa aad ka qabto kooxaha diiradda internetka ee lacag -bixinta ah.
5 Qorsheyaasha Caymiska Ilkaha ee Ugu Wanaagsan Waayeelka
20 Siyaabood oo Lacag laguugu Siinayo Raadinta Shabakadda 2022 | Samee $ 3000/Bishii
15 Apps Like Mistplay oo si fudud ku soo baxay | Lacag Degdeg ah
Biyaha Fiji Ma U Qalmaa? Maxaa Loogu Qaali Yahay
Xarunta Macmiilka Qaranku Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Xarunta Macmiilka Qaranka (NCC) waa mid ka mid ah meelaha saxda ah ee aad ka heli karto kaararka hadiyadda. Haddii ay tahay Amazon,…
Dib -u -eegista Codadka Sahanka 2022: Sharci mise Fadeexad? Sida ay u shaqayso, Beddelka
Tirada dadka ku talaxtagay hal hawlo onlayn ah ama kan kale ee qarnigan ayaa socda…
Gamingjobsonline.com waxaa lagu sameeyay baaritaanno badan, iyadoo shaki laga muujiyay quluubta…
Lacag Lagu Siinayo Alaabada Tijaabinta: 25 Websaytka Tijaabinta Badeecada Macmiilka
Soo saarayaasha, horumarinta alaabadu mar walba ma fududa. Laga bilaabo marka ay aqoonsadaan baahida suuqa, qorshaynta, fikradda, ansixinta,...